Izeluleko Eziphezulu Eziyisikhombisa Okufanele Zenziwe Ngemuva Kokuhlupheka Kwisifo Sikashukela-Sikashukela Izingxoxo-Sinocare
Izeluleko Eziphezulu Eziyisikhombisa Okufanele Zenziwe Ngemuva Kokuhlushwa Isifo Sikashukela
Isikhathi: 2020-02-27 Hits: 273
1. Ulwazi lokufunda ngesifo sikashukela
Okungenani incazelo ye-glucose yokuzila ukudla ne-glucose yokuzila ukudla kufanele iqondwe.
Kungaziphi izizathu i-glucose ephezulu yokuzila ukudla?
Yiziphi izinto okungenzeka ukuthi zibangelwa yi-glucose ephezulu ye-postprandial glucose?
Yimuphi umphumela ozobangelwa uma ushukela we-postprandial glucose ephezulu?
Impendulo yale mibuzo izokwethulwa ngokuningiliziwe ezihlokweni ezilandelayo.
Ukusetshenziswa okunekhono kolwazi ekudleni
Lapho ubona inkomishi ye-ayisikhilimu, umlomo ugcwala ukuhaha, nesisu, umphimbo kanye nolimi kuye kube ukulungele ukunambitha; kodwa okwamanje, ubuchopho obunengqondo obunenzondo bukhuluma ukuthi luzokhuphula izinga likashukela egazini izikhathi eziningi.
Kodwa-ke, kuzoba kuhle kakhulu uma kunephimbo elimtoti: uvuselelwa nje ukuthi udle u-ayisikhilimu, ngoba kuzolunga uma uthatha isitsha esisodwa esincane selayisi eliphekwe, noma uma ugijimela ihora elilodwa ngemuva kokudla, noma uma i-insulin ye-XX IU inikezwa izikhathi eziningi.
Eqinisweni, iziguli zikashukela ezihlanzekile azilokothi zamukele izeluleko zabanye abantu zokuthi i-congee ingalinyusa kakhulu izinga likashukela wegazi futhi kufanele ithathwe kancane nokuthi ibhanana imnandi kakhulu futhi ayinakudliwa. Ngokuphambene nalokho, bayozama ukufaka imifino nokusanhlamvu okuhlanganisiwe lapho bebilisa i-congee noma kunciphise ukudla okuyisisekelo lapho bedla ubhanana. Ngokufunda ngokucophelela nangokuhlola, futhi ungakwenza ngokuphelele lokhu. Ngemuva kokufunda ulwazi ngesifo sikashukela, kufanele uthole ukuzethemba okunjalo.
Ungase uthi: "Ngiyakwazi ulwazi oluthile ngokudla, kepha kunzima kakhulu ukukusebenzisa ngekhono". Kulungile. Ungabona ukuthi isipiliyoni esilandelayo singakusiza.
3. Ukuhlakulela umkhuba omuhle wokuzivocavoca
Cishe wonke amakhosi okulawulwa kweglucose anomqondo wokuzivocavoca, njengokugijima ngaphandle, ukuhamba epaki, ukugijima ubambe izimbumbulu, ukuhamba nge-sandbag eboshwe emilenzeni, kudlala i-badminton, ukudlala ithenisi yetafula, ukubhukuda (ngisho nokubhukuda ebusika) nokugibela ibhayisekili. Uyacelwa ukuthi ukhumbule: lezi izinto zokuzilibazisa nemikhuba yakho, kepha hhayi imisebenzi oyithatha ngezikhathi ezithile.
Uyacelwa ukuba ubhekane nobuvila bakho, uqale kusuka esinyeni sokuqala, khona-ke uzoqala uhambo olunempilo.
4. Ukwenza ubungane nodokotela omuhle impela
Incwadi ka Ukwenza Abangani Nabodokotela Ibhalwe nguMnu Wu Haiyun, udokotela omkhulu woMnyango Wezenhliziyo esibhedlela Esikhulu Sebutho Lenkululeko Labantu. Inzuzo enkulu kakhulu yokwakha ubungane nodokotela ukuthi ungakugwema ukukhubaza. Isibonelo, uqiniseka kakhulu ngudokotela okuthiwa uyisimangaliso othi kunomuthi omuhle ovela endaweni yakwamanye amazwe, nokuthi iziguli eziningi zikashukela ziyeka ukuthatha umuthi ngemuva kokuwudla futhi izinga likashukela wegazi nalo lifinyelela izinga elijwayelekile. Kwaqala ngentengo e-1999 RMB kepha njengamanje ku-999 RMB; lapho usukulungele ukuyithenga, ungabuza udokotela wakho umngani, bese impilo yakho nemali ingasindiswa.
Uyacelwa ukuthi ungabi nomuzwa wokuthi odokotela kunzima kakhulu ukwakha ubungane nabo. Njengoba ngazi okungenani, bobabili odokotela nabahlengikazi eMnyangweni we-Endocrinology bangathanda ukwenza ubungane neziguli ezinesifo sikashukela.
5. Ukwenza ubungane nesiguli sikashukela esihle impela
Akuwedwa osendleleni yokulwa nesifo sikashukela. Lapho ungazi ukuthi ungayiphatha kanjani i-induction eyenzeka ngemuva komjovo we-insulin, isiguli sikashukela sizokutshela ukuthi i-induction ingakhululeka ngemuva kwengcindezi eshisayo yansuku zonke ngethawula lamazambane nethawula elishisayo.
Lapho uzizwa ungakhululeki kahle esiswini ngemuva kokuphathwa kweMetformin, isiguli sikashukela sizokutshela ukuthi ukungakhululeki kwesisu kungaxazululwa ngemuva kokufakwa esikhundleni seMathebhulethi Anemibhobho e-Metformin Enteric.
Lapho ukopha okungapheli kwenzeka ngemuva kokuwa ngokuzumayo ngesikhathi sokuhamba, isiguli sikashukela sizokutshela ukuthi inxeba lingaphola ngakusasa ngemuva kokuba unikezwe ama-insulin amabili elangeni.
Izinkinga ezahlukahlukene ohlangabezana nazo ake zaba nazo ezinye iziguli zikashukela, ngokwesibonelo, lapho ulahlekelwe; lapho ungabaza impilo njengoba une-hypoglycemia enkulu; lapho unezinkinga; futhi lapho izidakamizwa zakho zingasebenzi. Bazokutshela izindlela zabo kanye nokuhlangenwe nakho kwabo kokwelapha lezo zinkinga. Ezimweni eziningi, ezinye izindlela zaziwa kuphela yiziguli ezinesifo sikashukela.
6. Ukuphathwa kwezidakamizwa ngokulandela i-oda lezokwelapha
Uma ungabhekana neqiniso lokuthi isifo sikashukela asikwazi ukuqedwa, kufanele wehlise umoya, bese ucabangisisa ukuthi ungakugcina kanjani ukuhlala ngokuthula noshukela. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngokuqinisekile kuyindlela ebaluleke kakhulu.
Izindlela zokuqapha ezilandelayo kufanele zibhekwe ukusetshenziswa komuthi:
1) Yamukela ukwelulekwa ngodokotela ezibhedlela ezijwayelekile, uthathe imishanguzo ngokuqinile ngokwemiyalo yezokwelashwa (Qaphela: Ungemukeli izidakamizwa ezinconyelwe abantu ngaphandle kwesitifiketi sokuhlinzwa udokotela).
2) Ungakhathazeki ukuthi ubuthi obuthile bungabangelwa yimuphi umuthi. Eqinisweni, umphumela omuhle wezidakamizwa emzimbeni womuntu udlula umthelela wazo omubi; ngaphezu kwalokho, cishe zonke izidakamizwa ezithengisiwe zidlulisile ukuqinisekiswa kwemitholampilo.
3) Ngokuyinhloko qaphela umphumela wezidakamizwa, ngokuhlaziya imiphumela yokuqapha yezinga le-glucose yegazi (okusho ukuphatha ngokucophelela konke ukuqapha kweglucose yegazi).
7. Ukwelapha ngokucophelela konke ukuqapha kweglucose yegazi
Njengoba kushiwo yisiguli sikashukela, ukulahla kwegazi lakho ngakunye akumele kungachithi. Imiphumela yokuqapha ushukela wegazi lonke ulwazi oluqoqwe phakathi nesikhathi sokulwa kwakho noshukela; isenzo singatholakala empini kuphela ngokuphatha ngokucophelela imininingwane eqoqwe enkundleni yezempi.
Isibonelo, ezimweni eziningi, izinga leglucose legazi lalijwayelekile esigulini sikashukela esilandelayo. NgoSepthemba 12, izinga likashukela egazini lalingu-4.3 mmol / L ngemuva kokudla kwakusihlwa, futhi lalingu-9.8 mmol / L ngaphambi kokulala. Ngemuva kokuba ngifunde inani elinjalo, ngaxhumana naye ngokushesha okukhulu. Ungitshele ukuthi njengoba imifino eminingi ithathwa ekudleni kwakusihlwa, amakhalori ayenganele, lapho i-hypoglycemia itholakala ngemuva kokudla kwakusihlwa, wayekhathazeka ngokuthi i-hypoglycemia izokwenzeka ekuseni, futhi ngaleyo ndlela iphuze inkomishi eyodwa ye-yoghurt; kepha ushukela wegazi kwangaphambili. Kodwa-ke, amaqiniso alandelayo afundwa ngalezi zilinganiso ezimbili ze-glucose yegazi:
Ekudleni, imifino akufanele ithathwe yodwa ukwenza ukuthi izinga likashukela wegazi lifinyelele inani elijwayelekile, futhi nenyama efanele nayo kufanele ithathwe; futhi njengoba umzimba womuntu uthonywa kakhulu inkomishi eyodwa ye-yoghurt, inani lokudla le yoghurt lingancishiswa ngesigamu uma izimo ezifanayo zenzeka ngokuzayo.
NgoSepthemba 14, ushukela wegazi osengaphambili wawungu-11.1 mmol / L. Ngemuva kokudla kwakusihlwa, wadlala umdlalo we-basketball, futhi wazizwa enesiyezi; wabe esethatha ngokushesha amagilebhisi ne-yoghurt, eyayibangela i-hyperglycemia.
Uma izinga likashukela wegazi belingakakulungeli ngemuva kokuqedwa kwezinye izinto, lo muthi ungahle uhlonishwe njengongakulungele ukwelashwa kwamanje, futhi udokotela angabonakala ngokulungiswa kabusha kwerejimeni.
Kamuva, izinga leglucose lakhe laba ngcono futhi laba ngcono. Eqinisweni, wayengumfundi esikoleni samabanga aphansi eneminyaka eyi-15.
Ikhasi Langaphambili: Ulwazi Oludingekayo Lwezingane Zesifo Sikashukela
Ikhasi elilandelayo: Izizathu Eziyishumi Ezivamile Zokushintshashintsha Kweveli Yegazi Glucose